Ungamangala ukuthi Yikuphi Ukudluliselwa Kwe-B2B Okuvalayo | Martech Zone
NgoMsombuluko, Januwari 5, 2015 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Umshini wokuthengisa kunoma iyiphi inkampani ye-B2B kufanele ulungiswe kahle, ugcotshwe kahle, futhi usebenzise ijubane eligcwele ukwenza umehluko entweni engezansi. Ngikholwa ukuthi izinkampani eziningi zihlupheka ngoba nje zincike kakhulu ebhizinisini elisha ngezingcingo ezibandayo, kepha abasebenzi bazo abanalo iqembu elifanele ukwenza umsebenzi onzima wokuthola impumelelo.
I-CEO isanda kwabelana nami ngeMetrics and Marketing Metrics yeSoftware ephumelelayo njengezinkampani Zezinsizakalo ngabakwa-Insight Venture Partners - futhi izinombolo zingakuthusa. Kuthatha ithani lomsebenzi ukuthola ikhasimende elisha. Awunakuba neqembu elingangeni emsebenzini ligijima nsuku zonke futhi ulindele ukwenza umehluko.
Noma ungakwazi? Kunomthombo owodwa webhizinisi le-B2B eliguqula liphakeme kakhulu kunanoma yimuphi omunye ongase ungalisebenzisi.
Lapho uhlaziya isilinganiso sokuguqulwa ngesiteshi, isiteshi esisodwa sivela njengomnqobi ocacile. Ukudluliselwa kwamakhasimende nabasebenzi kukhiqiza isilinganiso sokuguqulwa esingu-3.63%, cishe esiphindwe kabili kunesiteshi esilandelayo-amawebhusayithi anezinga lokuguqulwa elingu-1.55%. Okomphakathi kunesilinganiso sokuguqulwa esingu-1.47% nokuseshwa okukhokhelwe okungu-0.99%. Iziteshi ezisebenza kabi kakhulu izinhlu eziholayo ezinesilinganiso sokuguqulwa esingu-0.02%, imicimbi enezinga lokuguqulwa elingu-0.04% nemikhankaso ye-imeyili enezinga lokuguqulwa elingu-0.07%. UGilad Raichstain, Implisit.
Sihlala simangele njalo lapho sikhuluma nabalingani bezixazululo futhi iningi labo alunalo uhlelo olukhona oluvuza abasebenzi noma ukuthunyelwa kwamakhasimende. Abasebenzi bakho bangompetha (noma kufanele babe) ngabaphathi bebhizinisi lakho - bakukhuthaze kuwo wonke amanethiwekhi abo. Amakhasimende akho angesinye isisetshenziswa esimangazayo. Ingabe unayo i-imeyili ephuma ngezikhathi ezithile ibuza ukuthi bangathanda yini ukudlulisela noma ngubani? Ngabe unikeza eminye imiklomelo noma imali kulabo abadluliselwe? Le datha ingahle ikwenze uqale!
Okungenani, ukuba nekhasi lokufika elibamba umthombo onezixhumanisi ezihlukile ezisatshalaliswe kubasebenzi bakho, amakhasimende, kanye nozakwethu kufanele kube phezulu kokusemqoka kwakho. Lokhu kuzokuvumela ukuthi ulandelele futhi uvuze ukuthunyelwa kwakho okuhle kakhulu!
I-Implisit ivuselela amathemba akho nokuxhumana kwamakhasimende kwirekhodi elifanele le-CRM, ikuvumela ukuthi uphathe ipayipi lakho ngempumelelo ngenkathi ikugcina wena neqembu lakho isikhathi esibalulekile emisebenzini eyisicefe. I-Implisit isebenzisa ama-algorithms akhomba i-imeyili ngayinye, umcimbi wokuxhumana kanye nekhalenda bese uwufanisa nethuba elifanele - i-100% ngokuzenzekelayo.
Tags: b2bb2b amabhentshiUkudluliselwa kwe-b2bukuthengiswa kwe-b2bUGilad Raichstaincacisa
Abasebenzisi Be- Injini Yokusesha Imibuzo engu- # Buza Ngebhizinisi Lakho
Usuku lwe-valentines 2015 izithombe
Jan 6, 2015 ku-5: 31 AM
Wow iposi enhle kakhulu.Uchaze zonke izinto ngendlela enhle kakhulu. Ngiyabonga
Aug 20, 2015 ngo-10: 53 PM
UDoug, ngenze uhlelo lokudlulisela phakathi kweqembu lami kulo nyaka (2015). Into enhle engake ngayenza. Luhlelo oluhle impela. Lapho elinye lamalungu eqembu lami liletha iklayenti elisha kuphothifoliyo yethu, ngivuza lowo msebenzi nge-5% yokwakhiwa kwewebhusayithi okwakhiwe. Ngakho-ke, ngokwesibonelo uma bedlulisela iphrojekthi yewebhusayithi eyi- $ 10,000, bazobe sebethola ibhonasi engu- $ 500. Ngabe iqembu lami liyaluthanda lolu hlelo? Duh! Yebo, bayayithanda.
Aug 21, 2015 ngo-1: 02 PM
Lokho kumnandi uGreg! Siyazithanda izinhlelo zokudlulisela. Abanye abantu bacabanga ukuthi kuwumkhuba ongajwayelekile, kepha izinkampani zikhokhela abantu abathengisayo ngaso sonke isikhathi ukusiza ukushayela ibhizinisi… kungani ungakhokhi ozakwenu nabasebenzi bakho?